Guriga - Farsamada Hadalka
UtterTechnology waa mid ka mid ah Blog-yada ugu fiican ee bilaashka ah ee Talooyin iyo tabaha casharrada ku saabsan farsamada sida Cloud, Games, Mobiles, IoT, Suuqgeynta Dijital ah & qaybo kale oo badan. Waxaan ku dari doonaa qaybo badan marka loo baahdo. Mawduucyada ayaa aad waxtar ugu yeelan kara nolol maalmeedkaaga taas oo maalmahan ku wareegaysa Tignoolajiyada. La soco blog-kan wixii ku soo kordha
Kalmada Maanta #337 Tilmaam iyo Jawaab
Waxaa laga yaabaa 21, 2022 Waxaa laga yaabaa 21, 2022
Wordle wuxuu ku qabsaday adduunka duufaan, xitaa haddii aadan ciyaarin ciyaarta maalinlaha ah, waxaad shaki la'aan ku aragtay fagaarayaasha dhalanteed ee dhammaan baraha bulshada. Ka hor inta aan la shaacin xalka,…
Kalmada Maanta #336 Tilmaam iyo Jawaab
Waxaa laga yaabaa 20, 2022 Waxaa laga yaabaa 21, 2022
Kalmada Maanta #335 Tilmaam iyo Jawaab
Waxaa laga yaabaa 19, 2022 Waxaa laga yaabaa 19, 2022
Kalmada Maanta #334 Tilmaam iyo Jawaab
Kalmada Maanta #333 Tilmaam iyo Jawaab
Waxaa laga yaabaa 17, 2022 Waxaa laga yaabaa 17, 2022
Kalmada Maanta #332 Tilmaam iyo Jawaab
Waxaa laga yaabaa 16, 2022 Waxaa laga yaabaa 16, 2022
Kalmada Maanta #331 Tilmaam iyo Jawaab
Waxaa laga yaabaa 15, 2022 Waxaa laga yaabaa 15, 2022
Sida loo isticmaalo Amazon Echo si aad u dhageysato Apple Podcasts
Amazon Echo waxay noqon kartaa xuddunta dhammaan madadaalada gurigaaga. Tan waxaa ku jira dhageysiga podcasts, muusik, ama wax kasta oo kale oo codka ku ciyaara TV-ga Dabka.
Kartida iyo murtida: Apex Legends Mobile Fade
Ignacio Huaman, kan ugu horreeya ee Legends badan oo Apex Legends Mobile-First Legends, Fade. Ilaa inta lagu daro taxanaha ugu weyn ee Apex Legends, Fade waxa kaliya oo laga heli doonaa Apex Legends…
Dhibcaha bilaashka ah ee koodhadhka Tycoon Military ee May 2022
Ma waxaad rabtaa dhibco bilaash ah Milatari Tycoon Roblox? Maqaalkan waxaan ku siinaynaa koodka Tycoon Military ee May 2022 si loo helo dhibco bilaash ah. Waxaad hadda isticmaali kartaa inta ugu badan…
Xayawaanka Simulator X codes (May 2022): Dheeman bilaash ah, Kobcinta qadaadiicda iyo Gingerbread
Soo hel dhammaan furaha furaha ciyaarta Midabka leh ee xiisaha badan ee Roblox Pet Simulator X si aad u hesho Dheeman bilaash ah, Kobcinta Lacagta Qadaadiicda, iyo in ka badan. Waxaad timid meeshii saxda ahayd haddii…
Codsiyada Mashruuca Ghoul ee Roblox (Maajo 2022) - Laxanka bilaashka ah iyo kor u qaadista
Codsiyada Mashruuca Ghoul ee Roblox waxay kaa caawin karaan inaad si dhakhso leh u hesho XP iyagoo ku siinaya wareegyo bilaash ah, kor u qaadis, iyo inbadan oo ciyaarta ah. Mashruuca Ghoul, waxaad dooran kartaa inaad noqoto…
Kalmada Maanta #327 Tilmaam iyo Jawaab
Waxaa laga yaabaa 11, 2022 Waxaa laga yaabaa 15, 2022
Wordle wuxuu qabsaday adduunka duufaan, xitaa haddii aadan ciyaarin ciyaarta maalinlaha ah, waxaad shaki la'aan ku aragtay fagaarayaasha dhalanteed ee dhammaan baraha bulshada. Wordle wuxuu qaatay…
Kalmada Maanta #324 Tilmaam iyo Jawaab
Waxaa laga yaabaa 9, 2022 Waxaa laga yaabaa 15, 2022
7 siyaabood oo lagu hagaajiyo muusiga Instagram ma shaqeynayo
Dhowrkii bilood ee la soo dhaafay, dad aad u tiro badan ayaa ogaaday in aysan mararka qaarkood muusig ku dari karin Instagram. Gaar ahaan, dhejiska muusiga ee Sheekooyinka Instagram kamuu shaqayn…
Sida loo sawiro bogga shabakadda oo dhan ee iPhone ama iPad
IOS-ka Apple waxa uu leeyahay qaab dhismeed kaas oo kuu ogolaanaya in aad sawirato. Habkani waxa kale oo uu kuu ogolaanayaa inaad qabsato bogag dhan iPhone kaaga ama iPad-kaaga, kaas oo aad markaas kaydsan karto...
Sida Roblox loogu ciyaaro Nintendo Switch
Roblox waa madal ciyaaraha online ka ah oo caan ah taaso u ogalaata dadka inay samaystaan ​​ciyaaro u gaar ah oo qof walba ciyaari karo. Malaayiin dad ah ayaa tiro badan oo ciyaaraha ah ku ciyaara masraxa,…
Sida loo sahlo habka mugdiga ah ee Wikipedia mobile app ama website
Qalab kasta wuxuu ku geli karaa Wikipedia qaab mugdi ah. Haddii aad isticmaasho Wikipedia in badan, asalka cad ee goobta waxay u badan tahay inuu ku gubtay maskaxdaada. Goobta waxaa loo sameeyay mid fudud oo ula kac ah.
Zelle ammaan bay u tahay inay soo dirto oo ay lacag ka hesho dadka la aamini karo
Waxaad lacag u diri kartaa qof aad taqaan oo aad ku kalsoon tahay adigoo isticmaalaya Zelle. Zelle waxay ku biirtay adeegyada sida PayPal iyo Venmo sanadkii 2017 si fudud oo lacag loogu diri karo taleefankaaga.
Sida Loo Dhoofiyo Qoraalada iyo Qoraalada Qoraalada ku salaysan ee Facebook-ga
Facebook-ga waxa uu sameeyay qalab u sahlay in ka badan sidii hore in dadku ay isaga tagaan shabakada bulshada iyaga oo aan si joogto ah u tirtirin waxa ay ku jiraan.
Dhibaato ku haysata abka Amazon? 7 siyaabood oo lagu xaliyo dhibaatada
Waxaa laga yaabaa 13, 2022 Waxaa laga yaabaa 13, 2022
App-ka Amazon, waxaad ka dukaamaysan kartaa oo baadh kartaa, dalban kartaa dalabaadka onlaynka ah, hubin kartaa heerka dalabka, iyo xataa waxaad ka heli kartaa qiimo dhimis dukaamada Amazon ay leedahay sida Cunnada Dhan. Goorma…
Sida loo kaydiyo jihooyinka Khariidadaha Google ee taleefankaaga si aad ugu isticmaashid offline markaad baabuur wadid
Waxaa laga yaabaa 12, 2022 Waxaa laga yaabaa 12, 2022
Isticmaal Khariidadaha Google-ka adigoon lahayn xiriir internet ah adigoo soo dejisanaya tilmaamaha. Markaad meel dhexe ku sugan tahay oo aadan marin internetka, Khariidadaha Google waa badbaadiye nafeed. Tani…
© 2022 Utter Technology • Lagu dhisay GeneratePress